Yokuqala isibhamu kwezemidlalo
I isibhamu kokuqala iyithuluzi okuhlose ukhombise isiqalo eminye imidlalo noma eminye imicimbi ekhiqizwa therefrom ngu shot nalutho. Ukusetshenziswa kwezikhali ezinjalo kufanele ilungiswe iziqondiso.
Ukuze akhombise kokuqala mncintiswano ingasetshenziswa njengendlela izibhamu evamile, futhi ngokukhethekile imodeli. Kuvele imfuneko esisemqoka ukusetshenziswa kwezikhali-signal abasubathi kufanele kube unsuitability yayo njengendlela ukulwa ngokomzimba.
Ukuqala isibhamu kungaba misfire. Kule ndaba, imodeli esetshenziswa kakhulu kabanzi sigubhu, okuyizinto kulula ukukhiqiza shot eyalandela. Yokuqala isibhamu ne esitolo kuyaqabukela asetshenziswa.
Ukuze ulungise nesikhathi timekeepers mncintiswano actuate kumadivayisi wabo. Ukuze wenze lokhu, ziqondiswe the ufasimbe noma kungaphenduka ibonakala ngemuva ukuqhuma kwesibhamu. Lokhu ugwema kungenzeka Iphutha okungenzeka lapho kuphakama ngenxa Isivinini ongaphakeme esiphelweni umsindo.
Kusukela ngeminyaka yoma ngasekupheleni kwekhulu elidlule, isibhamu kokuqala isetjentiswe kancane ehlukile. Eduze isikhundla abasubathi njengamanje elise Dynamics. Bona adlulisele noma ukulingisa umsindo isibhamu.
Kutfutfukiswa izinhlelo kokunika amandla isikhathi okuzenzakalelayo, ombangela ezama ukushintsha izikhali nozakwabo electronic. Ngo-Atlanta, e Imidlalo yama-Olympic ngo-1996, lapho kubhekiselwa kuqale umncintiswano umshini nowe isibhamu flash wadlula isibhamu. Nokho, ngonyaka wabuyela ukusetshenziswa ngezikhali ezivamile eSydney. Lokho kwakusho ke ekuqaleni mncintiswano. Vancouver Olympics 2010 baphinde electronic sokuqala isibhamu awasebenzisa isivinini ukushushuluza.
ESoviet Union ekhiqizwa onobuhle eziningana kokuqala amavolovolo. Kwakuyisikhathi ekhethekile tubeless isikhali nge umnikazi. Drum onobuhle esetshenziswa njalo lapho bekhonza ngezikhali ezifana "isibhamu", owawuke anikezelwe isimo non-ukulwa.
NeKomiti KaHulumeni ye-USSR uphasisiwe kwemidlalo emibili kokuqala isibhamu. Lawa kwakungamadodana nenganono, okuyinto zaziphawuleka ngokukhethekile ashiselwe kubakaki ngoba inzwa. Lokhu apharathasi fixed kokuqala mncintiswano kanye ifilimu fotofinishnym ikhithi "Omega".
Ukuqala isibhamu "TT" ikhiqizwa ngesisekelo self-ukulayisha isibhamu "TT" isampula namathathu banesifo esibi kwekhulu elidlule. Ngo indlela yamanje akusho eyobonisa mobile ekhaya isiqu abamhlaba. Esikhundleni salo kukhona tube esinqunyiwe, okuyinto waminza ephuma ekamelweni. Kuzo zombili izinhlangothi le ngxenye propylene. I cap iqinile nge pin ashisayo, okumele ukwenziwa. Lokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi kwakungekho kungenzeka Drilling umgodi ngokusebenzisa. Isiqu sawo asisho ukukhiqiza umlilo. Ilangabi kanye amagesi powder kuthiwa ukhiphe ngokusebenzisa izimbobo sise phezulu kwezindlu. Isango kungekho ukulwa namazinyo eziphikelelayo. Ngakho, lesi isikhali uhlelo ukuthi unesikhathi esangweni ezihamba ngokukhululekile isiqu iDemo-stroke.
Novatrack (amabhayisikili): incazelo models, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Imimese Spanish: isithombe kanye nencazelo. Ikhishi imimese, ukuzingela kanye nezokuvakasha
Yini okufanele ibe induku hockey ngebhola enganeni
Indlela ukususa isinyathelo kusukela ibhayisikili? izincomo esisebenzayo
Amachibi Okudumile e laseDnepropetrovsk
Stark (emabhayisikili) ukubuyekezwa, ezweni lendabuko
Black ingubo nge collar white nezinsiza kuwo
Izimpawu nokugula ngengqondo ezingabantu: ukubukeka, ukushintshashintsha kwemizwelo, umhawu, ubudlova,
Senza origami napkins etafuleni
Indlela yokwenza esidlekeni ngezandla zabo?
Yini enquma ingcindezi in the ketshezi negesi?
AmaDolphinarians eCrimea - izindawo ezimangalisayo
Emincane ngengilazi. incazelo eningiliziwe
Itiye le-Vietnamese: incazelo nokubuyekeza
Ephusheni, namazinyo fall out ngaphandle kwegazi - kusho ukuthini?